Timor Atsinanana : “Andro Mahafalin’ny” Fifidianana Malalaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Janoary 2018 7:56 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, 繁體中文, македонски, English
Nankalaza ny tsingerintaona faha-10-n'ilay fitsapànkevi-bahoaka izay nitondra ny fahazoan'ny faritra fahaleovan-tena ara-dalàna ireo mpitoraka bilaogy Timore. Nanoratra i Alf@ Montenegro [Tet]
Andro MAHAFALY ho an'ny vahoaka Timore rehetra androany. Tsaroantsika anio, ny folo taona lasa (30 Aogositra 1999), fotoana nanapahantsika rehetra hevitra hanafaka ny firenentsika tamin'ny fibodoan'ny indoneziana. HASAMBARANA GOAVANA ny HASAMBARANA izay nananan'ny Timore rehetra, folo taona lasa izay (saingy nisy ireo 21,5% nalahelo). Nambarantsika rehetra tamin'ny….. hiaka,…, sy tomany ny hasambarantsika. Eny, mbola azontsika tsapaina izany hasambarana izany na dia hatramin'ny androany aza, saingy nandritra izay folo taona lasa izay dia tsy mbola afaka olana sy fahoriana isika (ohatra lehibe amin'izany ny tamin'ny 2006). Maro ireo olona (ireo vahiny sasantsasany) no mijery ny zava-niseho tamin'ny 2006 sy 2008 ( 11 Febroary) ary milaza fa “FANJAKANA TSY MAHOMBY” [isika], nefa foto-pisainana tena diso izany.
sary avy amin'i Rusty Stewart
Nosoratan'i Aquarius Vinte Três fa ho azy, ny zavatra rehetra dia efa nanomboka tamin'ny fotoana nanoloran'ny filohan'i Indonezia B. J. Habibie ny sosokevitra fitsapànkevi-bahoaka [Tet]
Rehefa natolotry ny Filoha B.J. Habibie ireto safidy roa ireto : Manaiky na mitsipaka ny fizakàntena amin'ny 27 Janoary 1999, dia tampoka ny fipoitran'ny teny hoe ” NA VELONA NA MATY, MIALA ANY NY BAPAK [indoneziana]” tamin'ny 1999. Nandritra ireo fankalazana sasany tany Dili, dia nampiasain'ireo tanora ireto teny ireto ” NA VELONA NA MATY, ROAHY NY BAPAK [indoneziana]” mba hanafanàna indray ilay toe-panahy tia tanindrazana entina hanatsaràna ny vokatry ny “fitsapànkevi-bahoaka” tamin'ny volana aogositra 1999.
Nampiasain'ny hafa, toa an-dry Abel Pires da Silva, izay nanoratra tao amin'ny bilaogy RENETIL [Tet], ilay fotoana mba hitarainana momba ny tsy fisian'ny firaisana sy ny tsinjo lavitry ny vahoaka :
Tamin'ny volana aogositra tamin'ny folo taona lasa, tena ninoan'ny ankamaroan'ny Timore fa mety ho tsaratsara kokoa noho ilay iray niaraka tamin'i Indonezia ilay Timor Leste mahaleo tena. Tamin'ny fotoanan'ny fanoherana, IOMBONANA ny fahavalontsika, fahavalo izay nampifandray tànana antsika ny fanoherana azy. Nariantsika tamin'ny andron'ny fahaleovantena ilay fahavalo iombonana izay nitahiry antsika ho toy ny firenena matanjaka. Vokatr'io toe-draharaha io, dia maro ireo vondrona nanomboka nitady ny tombotsoany manokana tany Timor Leste. Maro ireo vondrona manomboka manambara ny “fandraisany anjara” ary mangataka ny fanjakana “hikarakara” an-dry zareo.
Tao anaty filazàna tsotra, no nanambaran'ny tarika Outravez, fikambanan'ireo mpianatra Timore monina any Indonezia, tamim-pireharehana ny fivoahan'ny rakikirany vaovao, andrenesana hira iray natokana ho an'ny andron'ny fitsapànkevi-bahoaka [Tet], ary nizaràn-dry zareo ny fampisehoana hataony eo anoloan'ny lapam-panjakàna ao Dili.
Ny varavarankely tsara indrindra tamin'ny fampisehoana sy ny hafaliana teo anoloan'ny lapam-panjakàna androany dia nalaina avy tamin'ny bitsiky ny CJITL – Centru Jornalista Investigativu Timor Leste ( foiben'ny mpanao gazety mpanao fanadihadiana any Timor Leste). Ny tena nahasarika indrindra dia ilay kintan'ny pop indoneziana Krisdayanti. Mitanisa lahatsoratra voafantina avy amin'i Gil ao amin'ny Twitter ny @ CJITL:
tokotokony ho arivo olona eo ho eo no tafavory nanoloana ny lapam-panjakàna, tamin'io fampisehoana goavana io.
‘Manao ahoana i Dili,’ ireo no voalohan-teny teo imolotr'i Kridayanti rehefa nihira ilay hira ” rai dili rai cidade” izy
distrika 13 no hanampy ny hafany amin'ny fiteniny avy… miato kely i Kris
Hoy Ramos Horta ” tena zava-dehibe ny androany, tsy maintsy tsarovantsika ireo maty mba hahazoantsika ny fahafahana”
Lahatsoratra fahatelo tamin'ny andiany fahatsiarovana ny faha 10 taonan'ny tsingerintaonan'ny fitsapankevi-bahoaka tany Timor Atsinanana ity. Fitsapankevi-bahoaka izay nitarika ho amin'ny fankatoavan'ny iraisam-pirenena ny fahaleovantenan'ilay faritra. Tamin'ny lahatsoratra voalohany, nasongadinay ny fanohanan'ny vondrona iraisam-pirenena ny fahalalahan'i Timor Atsinanana. Tamin'ny faharoa dia nitafatafa tamin'i Abe Barreto Soares , izay iray tamin'ireo nikarakara ny hetsika fankalazàna ny firaisankina natao tany Timor Atsinanana tamin'ny Aogositra sy Septambra 2009, izahay.